Semalt बाट उन्नत अयोर वेब महत्वपूर्णहरूमा एक प्राविधिक SEO गाईड
एसईओ पेशेवर को रूप मा, हामी निदान गर्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ र हाम्रो ग्राहकहरु को लागी समाधान प्रदान गर्न को लागी हामी आफ्नो वेबसाइट मा एक राम्रो उपयोगकर्ता केन्द्रीत अनुभव वितरित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी तपाइँलाई तपाइँको कोर वेब भिटेलहरू (CWV) कसरी सुधार गर्न सक्दछौं भनेर देखाउनेछौं।
हाम्रो ढोकामा हिड्ने प्रत्येक ग्राहकले हामीलाई तिनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूको लागि राम्रो वेब अनुभव प्रदान गर्ने आशा गर्दछ। तर के तपाईंलाई थाहा छ त्यो व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ? Google द्वारा उद्धृत गरिएको भर्खरको अध्ययनले CWV का बारेमा केही रोचक तथ्यहरू प्रदर्शन गर्‍यो। त्यो पोष्टबाट हामी सिक्छौं कि मोबाइल वेब प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको ध्यान लगभग स्क्रिनमा राख्छन्। एक पटकमा --8 सेकेन्ड। जसले हामीलाई पेशेवरहरूको रूपमा चीजहरू धेरै गाह्रो बनाउँदछ।
के हामीले त्यो पोस्टबाट बुझ्यौं कि हामीसँग user सेकेन्ड भन्दा कम समय छ मोबाइल फोन प्रयोगकर्तालाई त्यस सामग्रीको वरिपरि कम्तीमा एउटा कारण दिनुहोस्। Seconds सेकेन्ड भन्दा कममा हामी अन्तर्क्रियात्मक सामग्री डेलिभर गर्न र प्रयोगकर्तालाई कार्य पूरा गर्नका लागि सक्षम हुनुपर्दछ।
एक वेबसाइट को कोर वेब भिटल्स तीन मेट्रिक्स हो जुन मानव प्रयोगकर्ताको नजरबाट साइटको प्रदर्शन मापन गर्न डिजाइन गरिएको हो। २०२० मेको सुरुमा ओपन-स्रोत क्रोमियम परियोजनाले यसको मेट्रिक्स अपडेटहरू घोषणा गर्‍यो, जुन गुगलका उत्पादनहरूमा छिटो सामेल गरिएको थियो।
हामी कसरी प्रयोगकर्ताको परिप्रेक्ष्यबाट प्रदर्शन योग्य बनाउन सक्छौं? यस प्रश्नको उत्तर दिन, तपाईं यी तीन प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्षम हुनुपर्दछ:
के यो लोड हुँदैछ?
के प्रयोगकर्ताले यससँग अन्तरक्रिया गर्न सक्दछ?
के यो दृश्य स्थिर छ?
मौलिक रूपमा, CWV मापन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको थियो कि वेबपृष्ठले माथिको- the- फोल्ड सामग्री सिर्जना गर्न आवश्यक स्क्रिप्ट कार्यहरू पूरा गर्न कति समय लिन्छ। जब एक पृष्ठ CWV मूल्यांकन पास गर्दछ, यसका प्रयोगकर्ताहरू पृष्ठ लोड त्यागने सम्भावना २ likely% कम हुन्छ। यी प्रयासहरूले प्राय: ती व्यक्तिहरूलाई फाइदा गर्छन् जो तपाईंको साइट प्रयोग गर्छन्।
पृष्ठ अनुभव अपडेट
सबै बज जस्तोसुकै भए पनि, CWV रैंकिंग सिग्नलमा अर्को तत्व जस्तै छ। जुन जुन मध्यबाट सुरू गर्दै, हामीले यो बिस्तार बिस्तारै अगस्त २०२१ सम्म घटेको देख्नुपर्दछ। पृष्ठ अनुभव रैंकिंगमा समावेश हुनेछ:
कुनै हस्तक्षेपात्मक मध्यवर्ती छैन
भर्खरको दस्तावेजले स्पष्ट गर्दछ कि रोलआउट क्रमिक हुनेछ, र साइटहरूले अचानक कठोर परिवर्तनको शिकार हुने बारे चिन्ता लिनुपर्दछ।
यहाँ महत्वपूर्ण चीजहरूको ब्रेक-डाउन छ जुन तपाईंलाई यो अपडेटको बारेमा थाहा पाउनुपर्दछ:
पृष्ठ अनुभव प्रति URL मूल्यांकन गरिन्छ।
पृष्ठ अनुभव मोबाइल ब्राउजर को URL को प्रतिक्रिया मा आधारित छ।
एएमपी अब उपरान्त कथाहरू क्यारोसेलहरूको लागि आवश्यक पर्दैन।
शीर्ष कथाहरू क्यारोसेलमा देखा पर्न योजना गर्ने साइटहरूको लागि CWV पास गर्नु अनिवार्य छैन।
खोज कन्सोलमा नयाँ पृष्ठ अनुभव रिपोर्ट
पृष्ठ अनुभव रिपोर्ट अब खोज कन्सोल में शामिल किया जाएगा। जानकारीको यस ताजा स्रोतले बचत डाटा समावेश गर्दछ जुन days ० दिन सम्म फिर्ता जान्छ। URL राम्रो मानिनका लागि, त्यहाँ केही मापदण्डहरू छन् जुन त्यो पूरा गर्नुपर्दछ।
URL CWV रिपोर्टमा राम्रो स्थितिमा हुनुपर्दछ।
URL को मोबाइल उपयोगिता रिपोर्ट अनुसार शून्य मोबाइल उपयोगिता मुद्दाहरु हुनुपर्दछ।
यूआरएल पूर्ण रूपले सेफ्टी-वार प्रयोगकर्ताहरूका लागि छ।
यूआरएल HTTPS मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
URL का कुनै विज्ञापन अनुभव मुद्दाहरू छैनन्, वा साइट विज्ञापन अनुभवको लागि मूल्या hasn't्कन गरिएको छैन।
नयाँ रिपोर्ट, जुन रोल आउट हुने अपेक्षा गरिएको छ, एक उच्च-स्तरको विजेट प्रदान गर्दछ जुन URL लाई राम्रो बनाउने प्रत्येक पाँच मापदण्डको लागि रिपोर्टहरूमा लिंक गर्दछ।
निदान र कार्यवाही CWV सुधारहरूको लागि कार्यप्रवाह
पहिले हामीले फिल्ड र ल्याब डाटाको अर्थ बिच्छेद गर्नुपर्दछ।
फिल्ड डाटा प्रदर्शन डाटा हो जुन वास्तविक पृष्ठ लोडहरूबाट संकलन गरिएको हुन्छ जुन तपाईंको वास्तविक वेबसाइट आगन्तुकहरूले उनीहरूको ब्राउजरहरूमा अनुभव गरिरहेका छन्। क्षेत्र डाटा कहिलेकाँही वास्तविक प्रयोगकर्ता निगरानी भनिन्छ। यी दुई सर्तहरूको अर्थ एउटै हो।
नयाँ कोर वेब महत्वपूर्ण मूल्यांकनहरू र पृष्ठ अनुभव रैंकिंग संकेतहरूले क्रोम प्रयोगकर्ता अनुभव रिपोर्टबाट स is्कलन गरिएको फिल्ड डाटा रिपोर्टमा समावेश जानकारीलाई हानी पुर्‍याउँछ।
कुन प्रयोगकर्ताहरू क्रोम प्रयोगकर्ता अनुभव रिपोर्टको हिस्सा हुन्?
Crux डाटा मौलिक रूपमा तीन मापदण्डहरू पूरा गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि एकत्रित गरिएको छ:
प्रयोगकर्ताले एक सिnc्क पासफ्रेज सेट अप गरेको छ।
प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो ब्राउजर ईतिहासलाई उनीहरूको ईमेल ठेगानामा सिंक गर्न अप्ट-इन गरे।
प्रयोगकर्ताले उपयोग तथ्या .्क रिपोर्टिंग सक्षम पार्यो।
कोर वेब भिटल्स मूल्यांकनको विश्वमा, क्रक्स सत्यको अन्तिम स्रोत हो। क्रुक्स डाटा पेजस्पेड इनसाइट्स, गुगल सर्च कन्सोल, गुगल डाटा स्टुडियोमा एक मूल-स्तर ड्यासबोर्ड, वा पब्लिक गुगल बिगक्वेरी प्रोजेक्ट प्रयोग गरी पहुँच गर्न सकिन्छ।
हामीलाई यो सबै किन चाहिन्छ भनेर ग्राहकहरू छक्क पर्छन्; ठीक छ, उत्तर CWV फील्ड दारा मेट्रिक्सको प्रतिबन्धित सेट हो जुन सीमित डिबगिंग क्षमताहरू र यसको डाटाको उपलब्धताका लागि आवश्यकताहरू छ।
किन कोही पृष्ठहरू क्रुक्सबाट डाटा उपलब्ध हुने थिएन?
केहि पृष्ठहरूमा निदान चलाउँदा, हामी यो पत्ता लगाउन सक्छौं कि Chrome अनुभव रिपोर्टमा केहि पृष्ठहरूको लागि पर्याप्त वास्तविक-विश्व गति डेटाको अभाव छ। यसको मतलब यो हो कि पृष्ठसँग क्रुक्सबाट डाटा उपलब्ध छैन किनकि क्रक्स डाटा अज्ञात गरिएको छ। यस डाटालाई पृष्ठमा प्रदर्शन गर्नका लागि रिपोर्ट गर्न पर्याप्त पृष्ठ लोड हुनुपर्दछ प्रयोगकर्ताको कुनै सम्भावना नभएको पहिचान हुने।
वेब कोर भिटालहरू वास्तविक प्रयोगकर्ता निगरानी डेटा प्रयोग गरेर राम्रोसँग पहिचान गरिन्छ र त्यसपछि प्रयोगशाला डाटा प्रयोग गरेर निदान गरिन्छ।
ल्याब डाटाले हामीलाई गहिरो दृश्यता र यूएक्समा अन्त्यमा-अन्तमा प्रदर्शन डिबग गर्न अनुमति दिन्छ। नाम "प्रयोगशाला" को रूपमा, डेटा नियन्त्रण नगरिएको वातावरणमा पहिल्यै परिभाषित शर्तहरू, उपकरणहरू, र समग्र नेटवर्क सेटिंग्ससँग संकलन गरिन्छ। ल्याब डाटा वेबबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। dev/measure, PageSpeed ​​अंतर्दृष्टि, क्रोमियम आधारित क्रॉलरहरू जस्तै डेपक्रॉल वा NodeJS लाइटहाउस, वा क्रोम देवटुलको लाइटहाउस प्यानल।
१. کروक्स डाटाका साथ मुद्दाहरूको पहिचान गर्दै:
यसका लागि, हामी प्रत्येक पृष्ठ कुन समूहमा पर्दछ र यदि उनीहरूको ध्यान आवश्यक छ भने पहिचान गर्न खोज कन्सोलको कोर वेब भिटाल रिपोर्टको साथ शुरू गर्दछौं। हामी क्रुक्स डाटामा देखिएको जानकारीको दोहन गर्छौं र समान यूआरएलहरू सँगै जोडी गरेर यसलाई अगाडि बढाउछौं। यस्तो जोडीको उदाहरण यी URL को व्यवहार ढाँचामा आधारित हुनेछ। यस प्रक्रियाको साथ, एक पृष्ठको लागि मूल समस्या समाधान गर्दा सम्भवतः सबै पृष्ठहरूमा समस्या समाधान हुनेछ जुन CWV मुद्दा साझा गर्दछ। यस चरणमा हाम्रो प्रो-टिप भनेको मोबाइल डाटामा फोकस गर्नु हो। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि गुगलले मोबाईल-प्रथम अनुक्रमणिका प्रणालीतर्फ झुकाव गर्न थालिसकेको छ, र कोर वेब भिटेलले मोबाइल उपकरणहरूमा SERP हरूलाई प्रभाव पार्छ। अन्तमा, हामी प्रभावित हाम्रो URL को संख्या मा आधारित हाम्रो प्रयास प्राथमिकता।
२. पृष्ठ गति अन्तर्दृष्टि प्रयोग गरी ल्याब र क्षेत्र डाटा संयोजन गर्न:
एकचोटि हामीले पृष्ठहरू पहिचान गरेपछि हामीलाई काम गर्न आवश्यक पर्दछ, हामी पेज स्पीड इनसाइट्स प्रयोग गर्छौं जुन लाइटहाउस र क्रोम यूएक्स रिपोर्ट द्वारा संचालित हुन्छ प्रयोगशाला रिपोर्टमा विश्लेषण चलाउन र पृष्ठमा कुनै सुस्त समस्याहरू फेला पार्न। नोट गर्नुहोस् कि प्रयोगशाला परीक्षणहरू एकल अफ एम्युलेट टेस्टहरू हुन् जसको अर्थ एक परीक्षण एक्लो १००% सही हुँदैन, र न त यसले निश्चित उत्तर प्रदान गर्दछ। सहि पठन प्राप्त गर्नको लागि कुञ्जी बहु उदाहरण URL हरूको परीक्षण गर्नु हो। पृष्ठ गति अंतर्दृष्टि मात्र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध र अनुक्रमणिका URL हरू लाई परीक्षण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
We. हामी टिकट सिर्जना गर्दछौं:
SEO पेशेवरको रूपमा, हामी सक्रिय रूपमा टिकट शोधन र QA प्रक्रियाहरूमा संलग्न रहन्छौं। हाम्रो विकास टोली स्प्रिन्ट मा काम गर्दछ। प्रत्येक स्प्रिन्टको लागि, टिकटहरूको सेट गठन गरिन्छ। यी टिकटहरूले हाम्रो विकास टीमलाई प्रयासको आकार अझ राम्रो बनाउन र ती टिकटहरू स्प्रिन्टमा राख्न मद्दत गर्छन्।
Q. Q4 लाइटहाउसको उपयोग वातावरणमा स्टेजिंगमा परिवर्तन:
हामीले कुनै कोडलाई उत्पादनमा धकेल्नु अघि हामी यसलाई अवलोकन र परीक्षणको लागि नियन्त्रण स्टेजिंग वातावरणमा राख्छौं। लाइटहाउस CWV मापन गर्नका लागि एक उत्कृष्ट साधन हो। लाइटहाउस मेट्रिक्सको लागि टेक्निकल एसईओ गाईडमा रहेको हाम्रो लेखमा, हामीले हाइलाइट गर्‍यौं कि हामी यस उपकरणलाई धेरै चीजहरूको लागि कसरी प्रयोग गर्न सक्दछौं र हामी कसरी यसलाई प्रयोग गर्दछौं। नोट गर्नुहोस् कि कम वातावरणमा कम स्रोतहरू छन्, त्यसैले हामी विकास कार्य पूर्ण रूपमा दिइएको कार्य पूरा गरे कि गर्दैनन् भन्नेमा स्वीकार्य मापदण्डमा भर पर्दछौं।
गुगलले यसको पृष्ठ अनुभव कम्पोनेन्ट वार्षिक आधारमा अद्यावधिक गर्ने योजना बनाएको छ जसको मतलब हामीले थप CWV रोलआउट्स आशा गर्नुपर्दछ। लाभहरू कल्पना गर्नुहोस् एसईओ पेशेवरहरू र हाम्रा ग्राहकहरूले उपभोग गर्नेछन् यदि हामी SERP मा नयाँ अत्यावश्यक अद्यावधिकहरूको सूचना प्राप्त गर्‍यौं भने।
प्राविधिक SEO पेशेवरहरूको रूपमा, हामी निदान गर्न राम्रो उपकरण केन्द्रित अनुभवका लागि समाधान प्रदान गर्न बढी सुसज्जित छौं। हाम्रो मद्दतको साथ, ROI हरेक च्यानलमा फेला पार्न सकिन्छ ताकि तपाइँको व्यापार मापन। तपाइँको जैविक प्रदर्शन एक साइट कती राम्रो छ को एक समग्र प्रतिबिम्ब हो। हामी तपाइँलाई यस स्थितिलाई लाभ उठाउन मद्दत गर्दछौं किनकी हामी SEO को लागी तपाइँको साइटलाई अनुकूलन गर्न जारी राख्छौं।